ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများက ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုမလေးရှားအမျိုးသားများကသတိပေး လက်တွေ့ရောဂါဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာ Mohd Ismail Mohd Tambi (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်တွင်ပေါက်ဖွားသည်
သိပ်ညစ်ညမ်း ED ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, မလေးရှားယောက်ျားသတိပေးခဲ့သည်။ လက်တွေ့ andrologist ဒေါက်တာ Mohd အစ္စမေးလ် Mohd Tambi (2016)
ဆောင်းပါးနှင့်ဗီဒီယိုမှ Link ကို
လက်တွေ့ andrologist ဒေါက်တာ Mohd အစ္စမေးလ် Mohd Tambi porn-သွေးဆောင် ED ခံစားနေရပြီးငယ်ရွယ်ပြီးအလယ်တန်းအသက်ယောက်ျား၏နံပါတ်မြင့်တက်ကပြောပါတယ်။ - Filepic
မလေးရှား: အတော်များများမလေးရှားယောက်ျားအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) မှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မသတိမထားမိကြသည်။
လက်တွေ့ andrologist ဒေါက်တာ Mohd အစ္စမေးလ် Mohd Tambi အလွန်အကျွံ porn ရှုမြင်နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်ဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်ပျော်မွေ့နိုင်ခြင်းနေသောလူများ၏အရေအတွက်တိုးရှိခဲ့သည်ဟုပြောသည်။
"ဘာဖြစ်သွား, သူတို့ကဖွင်နှင့်တစ်ဦးအမြင့်ရောက်ရှိ, ပြီးတော့ချနှေးကွေးခြင်းနှင့်ကွယ်လွန်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ချိန်ပြီးနောက်, ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ် "ဟုသူက Astro AWANI နှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
"ငါသည်သူတို့ ED တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းရှုမြင်ကြောင်းပြောပြသူကို Terengganu နှင့် Kelantan ကနေလူနာရှိသည်။ သူတို့ကနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အခွအေနေပိုဆိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ဒေါက်တာ Mohd အစ္စမေးလ် porn-သွေးဆောင် ED ခံစားနေရပြီးငယ်ရွယ်ပြီးအလယ်တန်းအသက်ယောက်ျားများ၏အရေအတွက်မြင့်တက်အပေါ်လည်းသူကပြောပါတယ်။ ဒေါက်တာ Mohd အစ္စမေးလ်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုအများအပြားနားလည်မှုလွဲမှားအထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်သောသူတို့တှငျ, ရှိပါတယ်ဟုပြောသည်။ အတော်များများကမလေးရှားယောက်ျားအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မသတိမထားမိကြသည်။
2014 အတွက်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုပေါ်တယ် Pornhub ကွာလာလမ်ပူ Terengganu မှလူကွာလာလမ်ပူနှင့် Kota Bahru အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တိုင်းပြည်အတွင်းထိပ်တန်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှု, ဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
ဤအတောအတွင်း TIME မဂ္ဂဇင်းယခုနှစ်အစောပိုင်းကလူ 46% နှင့် 16 မှအမျိုးသမီးများသည်အသက် 18 ၏ 39% အစီရင်ခံ, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆိုပေးထားသီတင်းပတ်အတွင်းညစ်ညမ်းရှုမြင်ကြသည်။
အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရ 1992 အတွက်, ယောက်ျားလောက် 5% 40 ၏အသက်အရွယ်မှာ ED ထံမှခံစားခဲ့ရသည်။
2013 အသုံးပြုပုံပုံ% 26 တက်ခဲ့သည်။
ထိုအခါ 2012 ဆွစ်ဇာလန်လေ့လာမှုလူပျို၏သုံးပုံတစ်ပုံအစီရင်ခံ, 18 မှအသက် 25, ED နှင့်အတူရုန်းကန်။
အပြင်အငယ်လူတို့တွင်မြင့်တက် ED များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များ ကိုးကား. မှစ. , အစီရင်ခံစာကိုလည်းညစ်ညမ်းအပြစ်တင်ခံရဖို့လည်းဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။